Xidid Samsung Galaxy S (GT-i9000), oo leh 2.3.3 Sanjabiil | Androidsis
trimax | | Xididka Android, Samsung, Tababarada, Noocyada Android
Tan iyo markii aan daabacnay maqaalka iyadoo Habka loo iftiiminayo 2.3.3 Gingerbread ROM (sumcadda magacaJJVK) ee loogu talagalay GT-i9000, kuwo badan ayaa ahaa kuwa wax ka weydiiyay habka loo helo Helitaanka xididka leh noocaan.
Qodobkaan waxaan ku tusi doonaa talaabo talaabo.
Kahor intaanan bilaabin, waa inaan soo dejino firida xidid (dhajiyay marin xidid) gudaha xiriirkan: CF-Root-XX_OXA_JVK-v2.7-CWM3RFS.zip. Ixtiraamka ragga ee XDA-Developers.
Kernelkan xididaysan ayaa loogu talagalay bilowga inuu xidido, aad u aasaasi ah. Ku Kernel CF-xidid Waxaa si toos ah looga qaadaa qalabka rasmiga ah ee Samsung, kaas oo kaliya Helitaanka xididka, Busibox, Soo-kabasho aan la ilaalin oo ku habboon ClockWorkMode. Wuxuu ilaaliyaa Waafaqid ugu badnaan la firmware asalka Samsung ee GT-i9000, XXJVK ah.
Haddii waxa aad raadineyso ay yihiin kernel lagu qurxiyo lagfix iyo shaqooyin kale, wali waa inaad sugtaa xoogaa si aad uhesho mid deggan.
TAN MA AH ROM (Si aad ugu rakibto ROM 2.3.3 iskudhiska gingerbread XXJVK ee Samsung Galaxy S eeg casharkii hore). Tani waa uun iniinyaha. Sidaa darteed, ka hor intaadan rakibin kernelkan, waa inaad horey ugu rakibtay ROM-ka buuxa habka horeyba loogu tilmaamay casharradan. Beertan la dhajiyay uma baahnid inaad masaxdo (dib u dajinta warshadda).
Mar labaad ayaan ku celin doonaa, mana daali doono, in kasta oo waqtigan la joogo, waa inaad horeyba u iftiimisay ROM-ka kahorna, waxaad sameysay jeegag habboon:
- BATATIKA WAA INAY SAMEEYAAN OO DHAN.
- HUBO IN FURAHA FURAHA AH AY KA SHAQEEYAAN MUDDADAADA SI AAD U GASHO HALKA DAWLADDA (Hoyga + Power On + Volume Down).
Raac tilmaamahan hoosta warqadda oo ha taaban batoon kale ama calaamadi sanduuq kale oo aan ahayn kuwa la tilmaamay:
- Faafi faylka CF-Root-XX_OXA_JVK-v2.7-CWM3RFS.zip. Waxaad heli doontaa CF-Root-XX_OXA_JVK-v2.7-CWM3RFS.tar faylka.
- Ka fur mobilada kombuyuutarkaaga (USB).
- Fur kan Barnaamijka ODIN (Waa inaad ka heshaa marka aad biligleyneyso ROM-ka buuxa, waxaan isticmaalay nooca 1.7).
- Dhagsii badhanka loo yaqaan «PDA», oo xulo feylka CF-xididka-XX_OXA_JVK-v2.7-CWM3RFS.tar, taas oo ah natiijada furitaanka .zip-ka.
- Daar mobilkaaga Qaabka soo dejinta.
- Conecta mobilada kombuyuutarkaaga oo leh fiilada microUSB.
- Hubso taas Sanduuqa "Dib-u-Qeybinta" MA AHA calaamadeyn. Waxba ma ahan wixii aad ka maqashay halkaas, HA calaamadeynin sanduuqaas. MAYA uma baahna in dib loo qaybiyo.
- Hadda riix Badhanka "BILAAB" ee Odin.
- Sug kan mobiilku dib ayuu u bilaabmaa. Wax kale ha taaban. Qiyaastii 30 ilbidhiqsiyo waa inay bilawdo kicin.
- Halkaas, horay ayaad u haysatay Root Android 2.3.3 Gingerbread oo ku yaal Samsung Galaxy S GT-i9000!
DIGNIIN: Had iyo jeer ma shaqeyso markii ugu horreysay, ha quusan. Marka waxaa laga yaabaa inaad ku celceliso nidaamka illaa dhamaadka uu awoodo inuu soo rogo Xirmooyinka xididaysan. Way ii shaqeysay isku daygii afaraad. 😉
Waxaad si sax ah u heli doontaa ROM XXJVK oo leh marin Root, oo aan lagfix ahayn, ama waxyaabo kale oo dheeri ah sida Voodoo badanaa keena.
MUHIIM !!: Kahor biligleynaya ROM ama Kernel, qodobada soo socda waa in lagu xisaabtamo:
- Kusamee barnaamijyada iyo xogta ku keydinta Titanium.
- Nuqul nuqul ah ka samayso galka «/ efs». Iyadoo leh Root Explorer ama Emulator Terminal
- Hubi in qaabka Soo-dejinta iyo Habka Soo-kabashada ay la shaqeeyaan isku-darka furaha "Home + Power + Volume Down".
Xusuusnow: Waxaad waxan oo dhan ku sameyn doontaa qatar adiga ah. Haddii aadan hubin, inaad si fiican u sameysid maahan oo inaad sugto cusboonaysiinta rasmiga ah inay ku timaado Kies Samung.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Tababarada » Xidid Samsung Galaxy S (GT-i9000), oo leh 2.3.3 Sanjabiil
Haddii qofna ogyahay casharro lagu xididayo Nexus One oo leh Gingerbread (2.3.3) miyaad gudbin kartaa iskuxirka fadlan! Waxaan raadinayey mid dhowr toddobaad laakiin ma heli karo
Meesha saxda ah ee baaritaankaagu waa kulankayaga Nexus One.
Halkaa u sii gudub oo su'aashaada ku dheji.
Ku jawaab Trimax
SAAXIIB AYAAN U BAAHANAHAY INAAN SOO GUDBIYO NIDAAMKA HAWLGALKA I9000 PQ ROOT IYO LEDI HORTA AYAAN LEEYAHAY SI AAN U SOO SAARO SALKA MOOBLANA WUXU SAMEEYAY OO KELIYA shaashadda kaliya mobilada ayaa hada ah sadexleey wareysi lala socdo iyo PC PC. HA QABAN WAXYAABO KALE OO DHAQAN AH MA SAMEYN KARAA EMAILKEYGA WAA gavi82@live.com
Hahaha helitaanka xididku kamuu gaabin inuu soo baxo… .. Aad baad u fiican tahay, sii wad
Hal su'aal, haddii aad rabto inaad ka saarto xididka, ma ogtahay waxa Kernel ay tahay inuu rakibo?
Ku jawaab lander
Haa, si la mid ah sidaad ula heshay ROM-ka cusub. Xusuusnow? Marka la rakibayo ROM-ka cusub ee 2.3.3 waxaan iftiiminey 3 faylal:
Waa hagaag, in la sameeyo geedi socodka gadaal ee ka saarista xididka. Kaliya waa inaad raacdaa isla nidaamkan laakiin faylka asalka ah -PDA ee laga helo ROM-ka: PDA_XXJVK.tar.md5
Taasi waa sababta aan u jeclahay qaabkan, maxaa yeelay gebi ahaanba waa la beddeli karaa.
Aha, taasi waa loo maleynayay. Laakiin haddii aan dhigo PDA oo aan horey ugu riday, ma waayi doontaa arrinta dalabyada? Waxaan u iri maxaa yeelay waa mid aad u qaro weyn haddii aan si sax ah u xasuusto. Ama hadaan dhigo aniga oo aan calaamadin kala-soocida, waxba ma dhici doonaan?
Sikastaba, waxaan hayaa keyd ah keydkeyga iyo mid kale oo Titanium ah, laakiin waa inaan waxbadan ogaado.
Waxaan hayaa sinjibiil laga soo qaatay movistar 2.3.3, miyaan ku rujin karaa habkan haddii intaa ka sii badan? Miyaan waayi mid ka mid ah waxa aan ku haysto mobaylkayga rakibay?
Ku jawaab ascalafo
Waan ka xumahay qoraalka labalaabka ah, laakiin su'aal kale ayaa soo baxday. Ma haysaa Galaxy S? Ma isku dayday inaad waxoogaa lagfix ah ku dhejiso qaabkan? Hadday sidaas tahay, kee?
Waa taas oo aan fiirinayay Voodoo laakiin wali ma aysan dhigin wax dhaafsiisan Froyo iyo si fiican, marwalba waad jiidi kartaa OCLF, laakiin haye, haddii aad hayso talooyin kale, oo kafiican tan ka wanaagsan In kasta oo runti aan dhaho ROM-kan ayaa aad iiga fiican aniga Froyo-tii hore ee OCLF; iyadoo aan loo eegin haddii aan wax ka yar ka dhaliyay Quadrant.
Way ka fiican tahay inaan u isticmaalno golaha su'aalaha, shakiga, ... sidaa darteed dadka kale waxay sidoo kale ka faaloon karaan khibradooda.
Tabobar wanaagsan Androisis, Galaxy S aad buu u wanaagsan yahay sameynta Rootku wax badan buu cajabiyaa, wax dhib ah kalama kulmin, xitaa Battery-ga waa taariikh, halkan waa fiidiyowgaygii oo Galaxy S uu ku socdo 2.3.3 oo aan xidid ku salaamayo Guatemala
Sidaan horeyba marar badan kuugu sheegay. Waan jecel nahay fiidiyowyadaada.
Salaan iyo mahadsanid Spain!
Perfect xidid markii ugu horeysay !!! Muxuu weno sq tb shaqeeyaa wareegga shaashadda ... Hore ayaan ugu xididaystay isagoo adeegsanaya hab kale mana u shaqeyn xro hadda wax waliba way shaqeeyaan ok.
Salaan kadib aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay !!!
Sideen ku hubin karaa inaan xidid ahay? Oo ma qof baa ii sheegi karaa si kooban maxaa asalka u ah? Dhamaan wanaag
Ku soo jawaab Yaesdedia
U gudub kulamadayada oo akhri tan, waxay caddayn doontaa fikradaha qaarkood.
Haddii wali shaki kaaga jiro intaas kadib, waad ku dhejin kartaa halkaas.
Thanks Trimax, waan sameyn doonaa. Dhamaan wanaag
Waad salaaman tihiin. Ma heli karo odin aan ku dhajiyo faylka ama ma arki karo. Sideen ku qaban karaa?
Ku jawaab javi
Waa salaaman tahay, waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado haddii tilmaamahan ay u shaqeeyaan qaabka GT-I9000 oo leh nooca baseband-ka ee I9000BVJJPH, waxaan ku rakibay Froyo 2.2.1 oo leh superuser iyo Vodoo lagfix.
Dhowr su'aalood, ma loo baahan yahay in la furo galax ka hor inta aan wax la qaban?
Sideen ku ogaan karaa haddii isku-xirnaanta furaha ay shaqeyso?
Waxaan kaliya ka cusbooneysiiyay kies illaa sanjabiil. Si loo soo celiyo nuqul ka mid ah titanium waa inaan xididaa. Waxaan raacay qaabkan markaan bilaabayo inaan wax walba dib u bilaabo ok, qalabka warbaahinta ayaa bilaabmaya si kedis ahna shaashaddu way damaysaa adiguna waxaad helaysaa astaanta movistar oo aad dib u bilaabaysaa, sidan oo kale marar badan… Maxaan sameeyaa ????
Wax la mid ah ayaa igu dhacaya aniga oo ah Pepe, waxaan cusbooneysiiyay kies si ay sanjabiilku u sameeyaan, waxay ahayd in la sameeyo habka oo tan la iigu soo gudbiyo. Ma aqaano waxaan sameeyo waxaan isku dayay inaan ka soo cesho warshad mana shaqeyso.
Weli ma shaqeynayo ka dib dib u soo celinta warshadda iyo dhammaan qaabka soo kabashada ayaa tirtira. Waa maxay waqti xun aan soo maray!
Aakhirkii waxaan soo dejistay Froyo oo aan ku rakibey odin, sidan ayaan ku helay inaan mar kale shaqeeyo, ka dibna waxaan ka soo degsaday sanjabiil iyo faylka xididka bog kale wax walbana si fiican ayey u shaqeeyeen. Waxaan kaa tagayaa isku xirka haddii ay ku caawiso: http://www.htcmania.com/showthread.php?t=188562
Aad baad u mahadsan tahay, waan isku dayi doonaa oo waan kuu sheegi doonaa
Shaki Pepe, ka dib markii aad Froyo gelisay Odin, sidee ayaad u dhigtay Gingerbread, Odin ama Kies? Laga soo bilaabo khadadka aad ii soo dirtay waxay umuuqataa inaad horay uga soo gudubtay midka Movistar, sax?
Markii aan rakibay Froyo, kiesku mar dambe ma aqoonsanin cusbooneysiinta Gingerbread, markaa waxaan ku sameeyay Odin inaanan dib u dhaqaaqin oo aan ka bilaabo dhibaatooyin isku mid ah ...
Mahadsanid waan sameyn doonaa.
Dhamaadkii wixii aan sameeyay ayaa la ii dhigay nooca rasmiga ah ee 'Eclair' ee Odin, ka dibna waxaan u cusbooneysiiyay Froyo ee Kies, Froyo waxaan dhigay keydka Titanium isla markiiba ka dib waxaan ku cusbooneysiiyey Gingerbread kies sarkaalka Movistar, wuu i siiyay xoogaa ul ah oo ku saabsan dammaanadda iyo walxaha. Runtu waxay tahay markii aad ii sheegtey inaad hagaajisay, waxaad isiisay degenaansho badan oo maskaxeed. Aad baad u mahadsantahay, waa maxay cabsida aan soo marnay.
Waad ku faraxsan tahay adiguba waad hagaajisay.
Ha ku mashquulin haddii ay kugu dhacday adiga oo kale aniga oo Pepe uu xal leeyahay. Waxa ay tahay inaad sameyso waa inaad romin u dhigtaa Odin, waa wax aad u fudud laakiin waa inaad si taxaddar leh u akhridaa casharro kasta oo meelo badan ku yaal, kan aan dhigay ayaa aniga ila muuqda
http://www.samsunggalaxys.es/viewtopic.php?f=50&t=984, halkan waxaan galiyay xiriiriye
Noocan romka ah waa kii aan adeegsaday
Nooca rasmiga ah ee movistar eclair:
Waad dejineysaa inuu leeyahay cilad, akhri casharradan ama mid kale oo aad si taxaddar leh u hesho, hubi ka hor intaadan geli karin habka soo dejinta, daminta mobilka (ka saar batteriga) isla markaana riix badhanka isla markaa: hoos u dhig, dhexe badhanka iyo awoodda (si fiican u riix labada hore marka hore ka dibna sii daa). Haddii aad hesho qaabka soo dejinta wax dhibaato ah kuma lahaan doontid. Farxad
Waan isku dayi doonaa, waa in badan oo aan baqay, sidoo kale waa inaan iraahdaa hal shay, waxaan ku sameeyay batteriga oo shidan
cinemax, ma leedahay msn marka waad i caawin kartaa si ka fiican, bff waa inaan kujiro qasan 🙁
Galaykeygu wuxuu dib u bilaabaa 2-dii 3-diiba inkasta oo aan daminayo, tan ayaan ku cusbahay aadna waan u baqayaa, ma i caawin kartaa 🙁?
Waan ka xumahay, waan shaqeynayaa mana awoodo hada hadii aad rabto galabta si fiican ayaan kuu caawin karaa, waxaan kaaga sheekeeyay batariga maxaa yeelay ma awoodo inaan damiyo wado kale, laakiin hadaad dami karto adigoon meesha ka saarin batteriga, dhib malahan, waa isku mid. Waa inaad daarto batteriga, haddii kale ma awoodid. Ii sheeg hadaad rabto msn-gaaga galabtana waan ku caawin doonaa.
ok, my msn: ivan_dj96@hotmail.com goorma ayaad internetka ku jirtaa? Midda kale, soo kabsashadu aniga imminka uma fiicna 🙁 Allahayow waxaan doonayaa inaan dhinto ...
Markay tahay 6:XNUMX ayaan isku xidhi doonaa, fiiri haddii aan gacan kaa siin karo. Ha ka welwelin dib u soo kabashada, badhamadu xoogaa way adag yihiin mararka qaarkood, haddii ay horay kuu sii shaqeyn jirtay, way sii shaqeyn doontaa adiga.
ok cinemax, soo kabsashadii way socotaa, waxay noqon doontaa waxaad dhahdo markay tagtaba way socotaa, waxaan rajaynayaa in la hagaajin karo, waxaan hayaa tan iyo jimcihii la soo dhaafay 🙁
sideen ugu heli karaa rootiga 'gingebread 2.3' samsung infuse .. qof ma i caawin karaa?
wax walba waa caadi! qol kale u dhig ODIN iyo voila, haddii qof kale dhaco, waad ogtahay! 😀
iyo xagee ka helaa qolka samsung samaynta? hadaad i caawiso ..
Aad baad ugu mahadsantahay, casharka, waxaan ahay laylis waana awooday inaan kaligay sameeyo.Ha arag sida aan u faraxsanahay hada hahaha, inkasta oo aan jeclahay inaan ku dhex mashquulsanaado taleefankayga miskiinka ah, waana jiray isku dayaya toddobaadyo ugu dambeyntiina waa taas !!!! iyo in ka yar hal daqiiqo. Aad baad u mahadsantahay !!!!
Waxaan hayaa nooca 'Gingerbread 2.3.3 (Vodafone) oo markaan sameeyo dhamaan tillaabooyinka taleefanku wuxuu dib u bilaabayaa 2 ilaa 3… Ma haysto wado aan ku joojiyo marka laga reebo daminta… Ma jiraa qof i caawin kara fadlan ??? Waxaan ahay quus…
Haye, sidoo kale waxaan haystaa dhibaato isku mid ah, waxa kaliya ee ka duwan ayaa ah inuu ka yimid Movistar. Haddii aad ku guuleysan lahayd inaad xalliso, waan ku faraxsanahay haddii aad ii sheegi lahayd sidaad u sameysay.
Ku jawaab Tajmutonto
Rom by odin oo kani ma cabsanayo ka soo dejiso golaha qaarkood
Mahadsanid Ivan, horeyba waan ugu guuleystey anigoo fiirinaya hareeraha, iyo wixii ka sareeya asalka oo ordaya ... hadaan waqti haysto waxaan dhigi doonaa sidii aan yeelay, mahadsanid!
Ka waran saaxiib, marka hore waad ku mahadsan tahay casharka…. Hagaag, waxaan rabay inaan ku waydiiyo hadii xaragadaani u shaqeyso galakeyga 4g oo leh 2.3? Salaan
hello, marka hore waad ku mahadsan tihiin waxyaalahan waxaad u shaqeysa si adag :).
Dhibaato ayaan qabaa kadib markii aan raacay talaabooyinka oo dhan waana in mobiilku shidaa dhibaato la aan ilaa inta sifiican looga helayo, laakiin xoogaa ka dib waxay umuuqataa inay u egtahay astaanta vodafone laakiin waxay noqotaa sida oo kale markasta. hayso haddii aad gacanta i siin karto. Mahadsanid
Ku jawaab Sito
puff aad baad u mahadsan tahay culeyskaas aad iga qaadayso lol. salaan
Raadi romar loogu talagalay golaha oo ku rid barnaamijka odin. Ka dibna ku celi talaabooyinka casharkaan markale. Waxaa jira casharro ku saabsan sida qolka loo dhigo odin.
Ha welwelin oo nasiibku, isla wixii igu dhacay ayaa igu dhacay.
Dhanka kale, bilowga boggan waxaad leedahay xiriiriye aan ka hadlayey.
Tutorial fiican dijo
Waxaan ku sameeyay labadii cashar ee sgs gt-i9000 oo way fiicnayd !!!!!
Ku jawaab cashar aad u fiican
Waxaan isku dayay SuperOneClick iyo z4root, laakiin ma aysan shaqeynin, qaabkani wuxuu la shaqeeyay waxyaabo yaab leh.
Waan ka laabanayaa faalladayda.
In kastoo markii hore ay umuuqatay inay sifiican usocoto, moobilkeyga waa la xannibay sida dadka kale ee kor wax ka sheegaya
Waxaan dib u cusbooneysiiyay Sanjabiisha haddana si fiican ayey u shaqeysaa, waan arki doonaa haddii aan sameeyo waxa ay ku yiraahdaan faallooyinka waan helay.
hello waxaa mudan oo kaliya in la xidido maadaama galaggaygu uu la imanayo 2.3.3 Sanjabiil waxaan kaliya ubaahanahay feylka uguhoreeya odin waana sax miyaa? iima oggolaaneyso inaan nuqul nuqul ka sameysto titaniun wuxuu ii sheegayaa inaan u baahan yahay inaan xidid yeesho.
Waxaan dhigayaa waxa galaxi GT I9000 leeyahay:
nooca firmware 2.3.3
Lambarka dhismaha Sanjabiil.BVJV8
Xaaladdayda Samsung Samsung GT-i9000T waxay la timid nooc Firmware ah oo ah 2.3.3 iyo lambar dhisme GINGERBREAD.UBJV6.
Miyaan isticmaali karaa isla xarkaha ay tilmaamayaan casharka ama inay wax kale sameeyaan?
Jawaab Oscar Hernandez
Wanaagsan, waxay ka shaqeysay markii ugu horeysay samsung galaxy S gt-i9000 oo leh rootiga sinjibiil 2.3.3
Fudud oo 3 talaabo ah ...
Waad salaaman tihiin caawinaad miinadu waxay ka timid warshad (oranji) nooca firmware-ka ah 2.3.3 iskudarka tirada Gingerbread.BVJV8 macno malahan hadii ay kusii sugnaato sida boostada ku qoran oo leh ROM XXJVK oo leh marin Root waa inaan u adeegsadaa isla feylka «CF-Root-XX_OXA_JVK -v2.7-CWM3RFS.zip »ama mid kale.
Waad salaaman tahay !!! Caawimaad ahaan, qalabkani wuxuu u shaqeyn doonaa Galaxy s 4g oo ka socda T Mobile? iyo tan Kale Waxay ogaan doonaan codsi wanaagsan oo lagu sii daayo oo ay si deggan ugu adeegsadaan Movistar Venezuela !!!!
Horay aad ayaad umahadsantahay !!! 🙂 theendez@hotmail.com
Jawaab Juan Mendez
Ola Waxaan isku dayayaa inaan tan sameeyo waxaan ku rakibay android 2.3.3 jvk Waxaan sameeyaa ficil-celinta ficilka ah waxaan damiyaa moobilkeyga waxaan furaa odin waxaan ku shubtaa xogta PDA waxaan ku daaraa moobilkeyga qaabka dowload, amdroid ayaa la soo baxa majarafad laakiin wax kale ma samaynayso waa inaan sameeyaa maxaa yeelay waxaan ku dhejinayaa mobilada kombuyuutarka markii uu jiro android. majarafadda ayaan ku bilaabaa waxna ma dhacaan
hello waxaan sameeyay waxa boostada ku dhahdo xidid nidaamka oo hada si joogto ah ayuu u noqdaa oo u noqdaa.
Waxaan ula jeedaa, shaashadii ugu horeysay ee aad aragto waxay u soo baxdaa inay daarto mobilka kadibna way damisaa iyo wixii la mid ah. aer haddii aad iga caawin karto inaan uga tago sidan?
Ku jawaab Santips
Isla waxaas oo kale ayaa igu dhaca aniga sidoo kale, haddii aad xal heshay waan ku faraxsanahay haddii aad ii sheegto waxaad qabatay.
hello ami, isla sidii baa igu dhacday, maxaad sameysay, mahadsanid
Ku jawaab Agusjs
Ciise Rojas dijo
Ma aqrin wax intaa ka sii badan laakiin waxaan u arkaa kuwa soo socda inay yihiin wax lagu qoslo:
«MUHIIM !!! Kahor biligleynaya ROM ama Kernel, qodobbada soo socda waa in lagu xisaabtamo:
Samee Keydinta Faylka "/ efs". Iyada oo leh Root Explorer ama Emulator Terminal »
Sideed u koobiyeyn kartaa efs-ka haddii taleefanka uusan weli xididaysan? oO 😛
Jawaab Jesús Rojas
Oscarolopez 77 dijo
Odinta dhexdeeda waxaad ku helaysaa baalal-huruud huruud ah oo lagu daray ayaa ka muuqda daaqadda farriinta?
Ustaad Icpr dijo
Cusbooneysiinta ayaa horeyba uga soo baxday KIES, waxaan horeyba uga sameeyay Enclair ilaa Gingerbread 2.3.3, qaabkeyguna waa Galaxy S GT I900T oo ka socda Claro Puerto Rico.
Ujawaab Master Icpr
Daniel Fernandez Ramirez dijo
Haye, waan ku cusbahay tan, waxaan xidid u dhigay SGSII-ga oo si fiican ayey u shaqeysay, kaliya waxay i tustaa aniga oo daaraya sanduuqa hurdiga ah. Taasi maahan dhibaatada; ujeedku wuxuu yahay hada markaan daarayo waxay ku sii socotaa meerto iyo waxay qabato waa shidaa oo damisaa
Jawaab ku bixi Daniel Fernández Ramírez
Glucolin 22 dijo
isku xidhka xargaha ayaa hoos u dhacaya ama ma muuqdo
WAAN LUMAY 3G
Wow markii ugu dambeysay ee guys, wax walba oo si fiican u shaqeynaya markii ugu horeysay, wax dhibaato ah ma lahan tallaabooyinka sida loo sharxay, shaqo weyn, hambalyo
Waa salaaman tahay .. kadib markii aan rakibey ayaan waayey 3g .. sidee ku soo ceshan karaa?
Android waxay lahaan laheyd suuq dhan 45% sanadka 2016, sida lagu sheegay daraasad
Google waxay soo saartay adeeg aruurinta arjiga ah